Akwụkwọ Onye Ọ bụla Na-enyocha Ọchịchị Ga-agụ | Martech Zone
Afọ ole na ole gara aga ezigbo enyi m Pat Coyle, onye nwere a egwuregwu ahịa gị n'ụlọnga, gbara m ume ka m gụọ Egoball. Maka otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, anaghị m etinye akwụkwọ ahụ na listi ọgụgụ m. Izu ole na ole gara aga, elere m ihe nkiri ahụ ma nye iwu akwụkwọ ozugbo ka m nwee ike igwu akụkọ ahụ ọbụna miri emi karị.
Adịghị m onye egwuregwu… ị nwere ike ọ bụghị. Anaghị m enwekarị ọ excitedụ na kọleji ma ọ bụ egwuregwu egwuregwu ọ bụla belụsọ na ọ bụ ezigbo iko Stanley. Y’oburu n’inweghi ekele n’egwuregwu mana ị n’acho onu ogugu, onu ogugu na nyocha, I kwesiri igu akwukwo a. Paul Depodesta (agwa ya bụ Peter Brand na fim ahụ nke Jonah Hill na-egwuri egwu) bụ ụbụrụ nke ọrụ… na-arụ ọrụ site na ọnụ ọgụgụ iji chọpụta ndị egwuregwu egwu dabere na pasent ha dị na isi. O nweghi ihe o mere ma oburu na o buru otu, okpukpu abuo ma obu ije. Billy Beane bụ akwara… General Manager nke na-etinye ndị otu ya na ọrụ ya n'ọrụ site na iji stats (yana omume ahia na-eme ihe ike nke na-ewetakwu ego maka talent) iji were Oakland A si na mmeri mmeri nke akụkọ ihe mere eme.
Agaghị m emebi gị akụkọ ahụ, mana ebe a bụ nkọwa. Oakland A nwere otu ụzọ n'ụzọ atọ nke mmefu ego nke ọtụtụ otu ịzụta talent. Iji zoo, ha choro ihe ozo - nchịkọta. Industrylọ ọrụ baseball dị ka ụlọ ọrụ ọ bụla ọzọ, ebe ọ toro n'afọ, ogo na akụnụba, ihe omuma oru na-agba ọsọ miri emi. Nsogbu bu na ihe omuma ihe omuma adighi ezi wrong ezighi ezi. Egwuregwu na-enweta mmeri na nke furu efu na hits na ọsọ, ọ bụghị na njehie, ịgba ọsọ ụlọ ma ọ bụ merie ndị beefy, square-jawed athlete. Chee echiche banyere azụmahịa gị na ihe ị na-eche n'echiche n'ihi na ọ bụ mgbe niile mere otú ahụ.
Nsogbu dị na Analylọ ọrụ nchịkọta bẹ dụ ụkporo ụnu ugbo labọ. Ọ bụ ezie na usoro ịzụ ahịa anyị agbanweela karịa saịtị anyị na mmekọrịta onye ọrụ agbanweela nke ukwuu (mkpanaka, vidiyo, mbadamba, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, wdg), mgbe ị banyere na weebụsaịtị gị nchịkọta ị mara nke ọma ịhụ ihe anyị hụrụ na di na nwunye ọtụtụ iri afọ gara aga. Nsogbu ozo bu na ihe omuma banyere ulo oru emebiwo ntọala nke ulo oru. A na-emepe akụrụngwa nyocha na mmụba kachasị ọhụrụ na-enyere aka n'èzí ụlọ ọrụ.
Azụmaahịa ọkachamara 'ihe ịga nke ọma na-emekarị gauged na ibiaghachi udu, page echiche, Fans na-eso ụzọ… mgbe ha nwere ike ọ dịghị ihe ọ bụla gbasara ndekọ ọnụ ọgụgụ na-arụpụta ahịa n'ezie. Ọ bụ eziokwu na njehie na homeruns nwere ike ịgbanwe usoro egwuregwu baseball, dịka oke mmụba nke ibe na-emetụta azụmahịa… mana ajụjụ a bụ ma ọ bụ ngosipụta arụmọrụ ka ị nwere ike imetụta.
Ihe dị oke mkpa na azụmaahịa ọ bụla bụ ma ndu ma ntụgharị. Chee echiche otu i siri guzobe nchịkọta akaụntụ. Ajuju nke mbu bu kedu ngalaba gị nchịkọta ga-awụnyere na?! Nke ahụ bụ ezighị ezi ajụjụ kpam kpam, ajụjụ kwesịrị kedu ka esi enweta ndị ahịa? Mgbe ahụ ajụjụ akụkọ kwesịrị ịbụ ebe ị ga-esi nweta ha. Onu ole ichoro itolite. N'oge ahụ, ndị nchịkọta ikpo okwu kwesiri inye aka weputa onodu obula ma nyere gi aka ighota ihe ndi di nkpa na ndi na adighi.
Kwa nchịkọta ọkachamara kwesịrị ịgụ Egoball ma megharia nghota ha kedu ka azụmaahịa si ebute ihe na ntanetị - ma ọ bụ saịtị ecommerce nwere ire ahịa, mbipụta weebụ nke na-enweta ego site na mgbasa ozi mgbasa ozi dabere na nleta, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ ị kwesịrị ịchụpụ nhọpụta, ụlọ ọrụ teknụzụ nke chọrọ ihe ngosi weebụ, ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-anwa ịme mmetụta ahụ na iru nke ika ya.
web nchịkọta ọ bụ a-atọ inyinya… na-agbali iji kwado ihe ochie ochie toolset n'ime ihe omuma ohuru a. Anyị chọrọ a ọhụrụ Ngwaọrụ nke na-amalite site na ndapụta ma gosi anyị otu esi atụle ihe ịga nke ọma n'ofe ọ bụla ma ọ bụ ikpo okwu.
Tags: Analyticsnchịkọta azụmahịanjikarịcha ntụgharịmgbanweihe mgbaru ọsọNa-agba ọsọinbound marketingedu ọgbọedubọlakwụkwọ egoego bọlọnụ ọgụgụ
Ọ bụ nnukwu akụkọ. Emere ezigbo akwụkwọ na ihe nkiri dị mma. Ya abụghịkwa eziokwu. Beane ketara ndị isi egwuregwu nke kpakpando nke jikọtara eriri ya nke oge ndị gara nke ọma. Ndị otu ya enwebeghị ihe ịga nke ọma kemgbe ahụ.
Ihe Moneyball na-egosi n'ezie bụ na iwulite akara na mgbasa ozi na-emetụta oke arụmọrụ. Ihe dị mkpa bụ ịmepụta akụkọ na akụkọ na-atọ ụtọ. Lọ ọrụ mgbasa ozi ga-eleghara eziokwu ọ bụla na-emegiderịta onwe ha anya ọ gwụla ma mmadụ nwere mmasị siri ike imebi akụkọ ahụ.
Ndewo nne nne,
Akwụkwọ ahụ na-agwa ụfọdụ n'ime ihe ndọghachi azụ site na ụlọ ọrụ ahụ n'isiakwụkwọ ikpeazụ wee nye ụfọdụ mmemme ndị ọzọ iji kwado edemede ya. Ọ dị ka ọ bụ ezie na Michael Lewis kpuchiri ụfọdụ ábụbà n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Enweghị m obi abụọ na stats ahụ abụghị "naanị ihe" nke na-eme ka otu nnukwu egwuregwu na-aga. Ndị otu dị ka ndị Yankees chịkọtara ụfọdụ ndị nkuzi dị egwu, ndị egwuregwu dị egwu nwere ike ịrụ n'ụlọ ọgwụ yana ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka. Maka ịchụpụ akụkọ a niile ka ọ bụrụ eziokwu, aga m eji nkwanye ugwu kwenye gị. Oakland A ji nyocha wee nyochaa ndị egwuregwu, otu ndị ọzọ kwenyere ịgbaso ụzọ ha mechara.
Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ akụkọ metụtara azụmahịa n'ozuzu ya. Ndị mmadụ na-echekarị echiche karịa ile anya na ihe akaebe dị n'ihu ha. Nke ahụ bụ omume nke akụkọ ebe a.
Jenụwarị 25, 2012 na 5:14 PM
A blog post banyere agụụ mmekọahụ m abụọ, baseball na mgbasa ozi mmekọrịta? EE!
Isi ego nke Moneyball bụ maka ịtụkwasị akụ na-enweghị ego iji wuo ọfụma karịa. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla nọ na-akwụ ụgwọ maka ọnụ ọgụgụ batting, ụlọ na-agba ọsọ na ERA, Beane na-elekwasị anya na OBP. Isi okwu ọtụtụ mmadụ na-atụ bụ na Moneyball abụghị maka iwu gburugburu OBP. Ọ bụ maka iwu ihe dị ka obere ọnụahịa. Ugbu a njikọ ahụ ejidela ma OBP bara uru karịa, Beane kwesịrị ịgbanwe.
Otu a bu eziokwu na ahia dijitalụ. Onye ọ bụla na-ekwu iji oge gị na ego gị na Facebook, Twitter na Google+. Mana ma eleghị anya, akụ dị ala bụ Pinterest, ma ọ dịkarịa ala maka akara gị, ọ ga-abụrịrị ịba uru karịa gị.
Ya mere, ka onye ọ bụla ọzọ jiri anya ya tụfuo ego n'ụlọ na-agba ọsọ. You'll ga-elekwasị anya na OBP (Pinterest). Ihe niile gbasara enweghị ike ahịa.